आचारसंहिता उल्लंघनमा होड | चितवन पोष्ट
गृह » आचारसंहिता उल्लंघनमा होड
चुनावको मिति नजिक आउँदै गर्दा सरकारलाई ‘जनताको’ साह्रै नै माया लाग्दोरहेछ । लामो समयसम्म सरकारमा बस्दा ख्याल नभएका जनताका समस्याहरु मतदानको मिति तोकिएपछि धमाधम याद हुँदोरहेछ । निर्वाचन आचारसंहिताले चुनावको मिति घोषणा भएपछि मतदातालाई प्रभाव पार्ने खालका योजना ल्याउन र निर्णय गर्न बन्देज नलगाएको हैन । तर, सरकार सायद मतदानको केही मिनेटअघिसम्म पनि कुनै ‘लोकप्रिय’ निर्णय गरिहाल्ने मुडमा पो छ । उम्मेदवारी दर्ता भएपछि उम्मेदवारले त्योभन्दाअघिसम्म आफूले गरेको भए ती कामका विवरणहरु मतदातासामु राख्ने हो । गर्न नसकेका कामहरु विजयी भएपछि गर्छु भन्ने हो । नयाँ योजना के हुन् ? मतदातालाई जानकारी गराउने हो । तर, माहोल त्यसरी गएको छैन । सरकारका मन्त्रीहरु उम्मेदवार भइसकेपछि बल्ल जनताका सरोकारका विषयहरुको सम्झना गर्दैछन् । तत्कालका लागि जनता रिझाउने र जितको चाँजोपाँजो मिलाउने गरेर भएका सरकारी कामकारबाहीहरुले चुनावमा जिताउने हो या हराउने हो ? मतदाताले नै निधो गर्लान् । सरकार त आफ्ना अनुकूलका प्रशासकहरु छानेर खटाउने र कर्मचारीलाई रिझाउनेसम्म गर्न थालेको छ । ‘शक्तिको यस्तो दुरूपयोग’को मतदाताले पनि ख्याल राख्नैपर्छ । कुरा सरकारको मात्रै हैन, सरकारबाहिरका दलहरुको पनि अवस्था आहा भन्ने खालको छैन । निर्वाचनका बेलामा के गर्ने वा नगर्ने भनेर हाम्रो देशको निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता नै जारी गरेको छ । सो आचारसंहिता आयोगले आफूखुसी निकालेको पनि हैन । निर्वाचनमा जाने दलहरुलाई र अन्य सरोकारवालाहरुलाई समेत राखेर जारी भएको आचारसंहिता हो त्यो । सरकार मात्रै हैन, अन्य दलहरु पनि निर्वाचन आचारसंहिता पालनमा उदासीन छन् । अझ भनौँ, कसले बढी आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने भन्ने होड छ । चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता थाहा भएन भन्न पाउँदैनन् । तिनले त्यहाँ भएका सबै दफा र बुँदा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । हर उम्मेदवारहरुले र दलहरुले ख्याल राख्नैपर्ने विषय हो आचारसंहिता । तर वातावरण हेर्दा लाग्छ, कुनै दल वा उम्मेदवारले आचारसंहिता जारी भएको छ भन्ने थाहा नै पाएका छैनन् । सायद, थाहा पाए पनि पालनमा वास्ता नै गरेका छैनन् । आचारसंहिता दल र उम्मेदवारको आचरण झल्काउने ऐना हो । आचारसंहिताको पूर्ण वा सम्भव भएसम्मका विषयहरु पालना गर्ने उम्मेदवार र दलहरु विधि र विधानको पक्षमा छन् भन्ने सूचक पनि हो । तर, यस्तो भेट्टाउन सकिएन । यो चुनावमा विजयी भएर जानेहरुले कानुनसमेत बनाउने हो । निर्वाचनका बेलामा सामान्य खालका आचरणसमेत पालना नगर्ने दल र उम्मेदवारहरुले कस्तो कानुन बनाउलान् ? विधिविधानको बाटोमा देशलाई लैजालान् ? गतिविधिहरु हेर्दा साह्रै नै दिक्क लागेर आउँछ । आफू स्वयम्ले पालना गर्नुपर्ने विषयहरु अरुले गर भनेर अह्राउँदा पनि दल र उम्मेदवारहरुले टेरपुच्छर लगाएको पाइएन । आचारसंहिता पालनमा हदैसम्मको उदासीपन देखाएका छन् दलहरुले । आचारसंहिता भनेको व्यक्तिमा अन्तरनिहित नेतृत्व र योजना कलाले चुनाव जित्ने वातावरण बनोस् भनेर जारी भएको हो । पैसाको बलमा किनेर पाइने शक्ति र पदको आडमा ओगटेको शक्तिले निर्वाचनमा भूमिका नखेलोस् भनेर जारी भएको हो । लोकतन्त्रका लागि व्यक्तिको नेतृत्व कला र देश तथा समाजको समृद्धिका लागि उसले देखेका योजनाहरु मुख्य विषय हुन् । जनताले यसैका आधारमा आफ्ना प्रतिनिधिहरु चयन गर्ने हुन् । आफूले बनाएका योजनाहरु विश्वासयोग्य बनाउनेलाई जनताले चुन्ने वातावरण हुनुपर्छ । ती योजना पूरा नगरे अर्को निर्वाचनमा फ्याक्ने वातावरण देशमा निर्माण हुनुपर्छ । हो, आचारसंहिताले यसै कुरालाई ख्याल राखेको हुन्छ ।
हाम्रा नेतामा नेतृत्व कला र समृद्धिका लागि उपयुक्त योजना बनाउने र त्यसलाई पूरा गर्ने क्षमता सायदै छैन । त्यसैले, पद र पैसाको आडमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने, मतदातालाई अलमल्याउने काम हुने गरेको छ । आचारसंहिता उल्लंघन बढ्नु भनेको देशमा क्षमतावान् नेताको खडेरी रहेछ भन्ने संकेत नै हो । हाम्रो देशमा निर्वाचनमा विचार र आचरणमा रहेको व्यक्तिले भन्दा पैसा भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुने, पार्टीले पनि त्यस्तैलाई पत्याउने र जनताले पनि उसैलाई अनुमोदन गर्ने परिपाटी फस्टाउँदै गएको छ । आचारसंहिता कागजमा सीमित छ ।
आचारसंहिताले भन्छ– गाडीमा माइक राखेर बजाउँदै मत माग्न पाइँदैन । तर देख्नुभएकै छ, तपाईं हाम्रो टोलटोलमा अहिले गाडीले बोकेका माइकहरुको चर्को ध्वनि प्रदुषण छ । आचारसंहिताले भन्छ– उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गाडी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ । एक जना उम्मेदवार जो प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उठेको छ भने उसले स्वीकृति लिए पनि चारपाङ्ग्रे गाडीहरु बढीमा चारवटा र मोटरसाइकल पनि चारवटासम्म मात्रै चलाउने हो । तर, उम्मेदवारको अघि–पछि कति कार र मोटरसाइकल हुन्छन् ? एकाध हैन, सयौँ हुन्छन् ।
भित्तामा पोस्टर नटाँस, पर्चा–पम्प्लेट पनि सानो आकारको मात्र बनाऊ, दुई रंगबाहेक थप रंगीन बनाउन पाइँदैन जस्ता विषय पनि आचारसंहितामा छन् । तर, यस्ता सामान्य विषय पनि उम्मेदवार र दलहरुले ख्याल नराखी बेवास्ता गरेका छन् । तिहारमा सडक वारपार गरेर तोरण टाँग्ने चलन अहिले हरायो । तर, निर्वाचनका बेलामा तोरण टाँग्न सुरू भएको छ । पार्टीका झन्डा र प्रचार सामग्री अंकित पोस्टरहरु तोरणझैँ सडक वारपार गरेर टाँगेर चोक–चोकलाई झिलिमिली पारेका छन् । तर, यो पनि निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन नै रहेछ ।
चितवनमा तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका लागि सदस्य पदका उम्मेदवार भएकामध्ये पाँच जना त निवर्तमान सासंद् नै छन् । एक जना पूर्वप्रधानमन्त्री र एक जना पूर्वमन्त्री नै यहाँ उम्मेदवार छन् । निर्वाचन जिते प्रधानमन्त्री र मह¤वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्न सक्ने हैसियत भएका व्यक्ति यहाँका उम्मेदवार छन् । वर्तमान सरकारको मन्त्रिमण्डलमा रहेका दुई–दुई जना सदस्य यही हाम्रो चितवनमा उम्मेदवार छन् ।
राजनीतिका हस्तीहरु चुनावमा उठ्दा आचारसंहिता पालनामा सजग हुनुपर्ने हो । तर, उल्लंघनमा पो होडबाजी गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय रुपमा नै खटाएको टोलीले उनीहरुलाई आचारसंहिता पढाएको छ । स्थलगत अनुगमनमा जाँदा आचारसंहिता उल्लंघन गरेर प्रचार सामग्रीहरु राखेको देखी पार्टीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर हटाउन भनेको छ । हटे÷नहटेको पुनः हेर्न जाँदा अवस्था जस्ताको तस्तै छ । चितवनमै टोलीको आग्रह दलहरुले नटेरेपछि टोलीले नै प्रचार सामग्री हटाउनु परेको छ । यो त दलहरुका लागि साह्रै लाजमर्दो विषय हो । तर, यस्ता कुराले उनीहरुलाई छोएको छैन ।
मतदातालाई अनेक वाचा तथा प्रतिबद्धता गर्ने दलहरुले आफ्नो आचरणमा पनि शुद्धता ल्याउनु पर्ने हो । आचरणको प्रतिबिम्ब निर्वाचन आचारसंहिताको पालना नै हो । अहिलेको क्रियाकलापले दलहरुको प्रतिबिम्ब राम्रो देखाएको छैन । हुन त, निर्वाचनका बेलामा हुने पहिलाको जस्तो तडकभडक यो बेला केही कम भएको भने हो । तर, तडकभडकको रुप भने बदलिएर आएको छ । पहिला मोटरसाइकल ¥याली निकालेर शक्ति प्रदर्शन गरिन्थ्यो । अहिले आचारसंहिताले रोक लगाएपछि मोटरसाइकल ¥यालीको ¥याइँ¥याइँ र ट्याइँट्याइँ कम भएको छ । तर, गर्न हुँदैन भनेका अन्य कामहरु पालना गर्न दलहरु उदासीन नै पाइएका छन् ।